Mamono afo indray e ! | NewsMada
Mitohy mandripaka ihany ny aretina pesta. Mitombo hatrany ny isan’ny ireo olona voatily mitondra ity valan’aretina ity. Saiky isan’andro koa no handrenesana fa misy ny maty. Eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny izao, niampy efatra indray ireo namoy ny ainy, omaly. Izany hoe, tafakatra 25 izany izao ireo maty. Izay ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Fa tahatahaka izany koa ny zava-misy any amin’ny faritany any. Mitombo koa ireo distrika ahitana olona voatily ho mararin’ny pesta.
Fa ankoatra izany, mampisahotaka ny fiarahamonina ny tsy fahampian’ny vaovao marina, manodidina ny fihanaky aretina. Aretina tena mihanaka amin’ny fomba haingana dia haingana tokoa. Afakomaly vao mba nahitan-teny, nisehoseho teto an-dRenivohitra ny filoham-pirenena. Asa, nahatsiaro voatsindrona tamin’ireo fanakianana maro nitobaka tetsy sy teroa angamba. Tahaka izany koa ny minisitry ny Mponina.
Inona moa fa nandamindamin-dresaka no mba nataony. Tsy misy tokony hampikoropaka, hono. Sy ny hoe : aretina azo tsaboina tsara ny pesta, ampy ny hoenti-manana sy ny fanafody hiatrehana izany, sns. Dia gaga ny rehetra! Hay ve misy sy ampy ny hoenti-manana, ka nahoana no tsy nampiasaina izany hatramin’izay ? Raha voalaza ombieny ombieny fa aretina mpitranga eto amin’ny firenena io, nahoana no tsy tamin’ny voalohany, tany amin’ny fiandohan’ny volana aogositra nitrangan’ny valan’aretina pesta dia efa noraisina ny fepetra rehetra ; navoaka ny vola, naparitaka ny fitaovana, ny fanafody… ? Dokotera aorian’ny fahafatesana, hoy ny ohabolam-bazaha. Tsy noho ny amin’ity pesta pesta ity ihany, fa amin’ny lafin-javatra hafa koa. Tsy mahagaga, endriky ny tsy fahombiazan’ity fitondrana ity hatramin’izay izany. Mpamono afo !